Farmaajo oo soo gaabiyey safarkii CONGO, kuna soo noqday Muqdisho - Axadle – Axadle
By Abdiwahab Ahmed	 On Apr 20, 2021
Muqdisho (Axadle) – Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho maalin qaadatay oo uu ku tagay magaalada Kinshasa ee axadle Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo (DRC).
Soo noqoshada Farmaajo ayaa ahayd mid lama filaan ah, waxayna madaxtooyadu horey u sheegtay in safarka uu qaadan doono labo maalmood, laakiin lagu soo koobay 24 saac.
Ma cada sababta safarka loo baajiyay, waxaase horey loo sheegay in Farmaajo uu ka walwalsanaa in xaalada Muqdisho faraha ka baxdo ama ay la wareegto magaalada, maadaama maalmihii la soo dhaafay xiisado ay ka taagnaayeen.
Booqashada Farmaajo ee Kinshasa ayaa horseeday waji cusub oo ku saabsan xaalada siyaasadeed ee dalka kadib codsi uga yimid Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi oo ku aadan in uu ciyaaro doorkiisa Madaxweynaha Midowga Afrika isla markaana uu dhexdhexaadiyo dhinacyada daneeya arrimaha Soomaaliya.
Si kastaba ha noqotee, Farmaajo ayaa sidoo kale soo saaray qoraal uu ku sheegayo inuu doonayo inuu galo wada xaajood si qof loo qabto oo loogu codeeyo doorashooyinka, taas oo umuuqata wax aan macquul aheyn hada.
“Waxaan soo dhaweynayaa doorka hoggaamineed ee Midowga Afrika ee fududeynta howlaha doorashooyinka, oo muwaadin kasta uu xor iyo xalaal u yahay inuu doorto wakiilkiisa. Dhammaan daneeyayaasha siyaasadeed waxay kaqeyb qaadan doonaan doodaha ku saabsan mustaqbalka dimuqraadiyadeena, ”ayuu Farmaajo ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Madaxweynaha UEFA Oo Si Xun U Aflagaadeeyay Ed Woodward & Madaxa